7 Egwuregwu bọọlụ kachasị ịtụnanya na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Egwuregwu bọọlụ kachasị ịtụnanya na Europe
Na-akpali akpali, na-akpali akpali, ebube, afụ ụfụ, ezughị okwu iji kọwaa 7 egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị ịtụnanya na Europe. Ọzọkwa, ọbụlagodi na ị chere na ị nwere ike ịghọta ịdị ukwuu ha, naanị mgbe ị banyere, na ị ghọtara anwansi.
Ya mere, ma ọ bụrụ na ị bụ onye ịnụ ọkụ n'obi Byren Munich, ndị a 7 football stadiums bụ kpam kpam kwesịrị gị ntị na ebe nke ebube gị ịwụ ndepụta.
Okporo ígwè iga bụ ihe kasị environmentally friendly ụzọ njem. Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, The Best Train Tiketi weebụsaịtị Na World.
1. Ihe kacha ịtụnanya Bọọlụ Ama egwuregwu na Germany: Ogige Iduna Park Na Dortmund
Signal Iduna bụ ama egwuregwu bọọlụ kachasị ukwuu na Europe ma nwee ike ịnabata 80,000 ịnụ ọkụ n'obi Fans n'azụ ya nnukwu iko facade na n'okpuruala kpo oku. Nke a bụ n'ihi na 2006 ntaghari ohuru. maka FIFA World Cup. Ya mere, ị nwere ike ịhazi atụmatụ ezumike bọọlụ gị maka egwuregwu egwuregwu oyi.
Signal Iduna bụ ama egwuregwu bọọlụ kachasị na Germany kemgbe 1965, taa ka ọ dịkwa ebe obibi ndi otu ndi otu Borussia Dortmund.
Uzo esi aga na mgbama bọọlụ Iduna Football na Dortmund?
Nwere ike ịga n’ámá egwuregwu ahụ Lightgbọ okporo ígwè Dortmund ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè RB nke jikọtara Austria na Germany.
Cologne na Dortmund Zụọ Ahịa
Munich na Dortmund Zụọ Ahịa
Hanover gaa Dortmund Ahịa Ahịa
Frankfurt na Dortmund Zụọ Ahịa
2. Ogige Allianz: Munich, Germany
Stadiummá egwuregwu bọọlụ nke abụọ kacha buo ibu na Munich, Allianz Arena bụ otu n'ime egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị ọhụrụ na Europe. Emepere ogige egwuregwu Allianz na Germany 2005 ma bụrụkwa ebe obibi ndị otu egwuregwu bọọlụ FC Byren Munich.
Ọ bụrụ na ị na-eme ịga leta Munich maka egwuregwu bọọlụ, ị ga-eju anya site na mpempe akwụkwọ plastik ahụ na-ebu ọkụ na mputa na-agbanwe agba. ndị a 2 atụmatụ na-eme ka Allianz otu n'ime 7 egwuregwu ndị dị ịtụnanya na Europe.
Uzo esi aga na Allianz Football Stadium Na Munich?
Nwere ike ịga Allianz Stadium site na ọdụ Frottmaning U-Bahn, dị nso.
3. Egwuregwu bọọlụ kachasị ịtụnanya na England: Ama egwuregwu Wembley
Footballmá egwuregwu bọọlụ nke abụọ kacha buo ibu na Europe, Egwuregwu Wembley nwere ike ịnabata 90,000 Fans. Ewuru bọọlụ kachasị na UK 2009, na njirimara ya kachasi elu bu 134 mita elu njiko, okpueze. N'ihi ya, ị ga-ahụ na ile egwuregwu League Cup, na mba egwuregwu-play-offs bụ nnọọ ihe ahụmahụ dị ịtụnanya.
Ya mere, Wembley abụghị naanị saịtị maka iko FA ikpeazụ, kamakwa ebe dịpụrụ adịpụ na London.
Uzo esi aga na Wembley Football Stadium na London?
Ga-ewere London Underground Circle Line site na ọdụ Paddington ruo ebe Baker St wee gbanwee na Line London Metropolitan Line ka Wembley Ogige Park.
4. Egwuregwu bọọlụ kachasị ịtụnanya na Italy: Egwuregwu San Siro Na Milan
San Siro bụ ama egwuregwu bọọlụ kachasị na Italy. Akpọrọ egwuregwu a dị ịtụnanya na Milan na nsọpụrụ nke onye mmeri ụwa abụọ bụ Giuseppe Meazza.
Emepere ámá egwuregwu ahụ 1926 ma nwee ike ịnabata 35,000 nwere mmasị n'ịgba bọọlụ. Otu n'ime njirimara ị gaghị echefu na mpụta ya na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie.
Otu esi aga San Siro Football Stadium na Milan?
Ama egwuregwu San Siro bụ 5 kilomita site na Milan etiti obodo. Nwere ike iru San Siro site na M5 metro line si Milan Central.
5. Egwuregwu Louis nke Abụọ na Monaco
Egwuregwu egwuregwu bọọlụ nke Louis II bụ ama egwuregwu na-egbu mmụọ ọzọ na Europe. Egwuregwu egwuregwu ahụ nwere arches itoolu mara mma na njedebe nke ala. Stadiumgbọ egwuregwu ahụ nwere ike ịnabata 16,000 Fans maka egwuregwu epic na French Riviera na ndabere.
na 1979 Prince Rainier III kpebiri ịmegharị ogige egwuregwu ọhụrụ na mpaghara Fontvieille. Parisian architect were nnukwu ozi, nke biri na 1984, ma mee ka ama egwuregwu Louis nke Abụọ bụrụ otu n'ime ama egwuregwu ama ama na Europe.
Uzo esi aga na Louis nke Abụọ Football na Monaco?
Egwuregwu egwuregwu bọọlụ nke Louis II bụ 10 awa site ụgbọ okporo ígwè si London.
6. Egwuregwu Groupama, Lyon
Nke a ikpọ egwuregwu na anyị 7 egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị ịtụnanya na Europe, nwere ike ịnabata 60,000 Fans. Na mgbakwunye, ọ bụ n'ụlọ ndị French football club Olympic Lyonnais na ga-ezukọta football na 2024 Egwuregwu Olympic nke Oge Ochie na Paris.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga Paris maka egwuregwu Olympic, Ikwesiri ileta nnukwu egwuregwu egwuregwu bọọlụ a.
Uzo esi aga na egwuruegwu Groupama di na Lyon?
Ị nwere ike Gaa n'ama egwuregwu Groupama site na ọdụ Decines Grand Large of tram line 3. Ọ dị nso na ama egwuregwu – dị nnọọ 10 nkeji’ na-eje ije.
7. Ama egwuregwu Velodrome Na Marseille
Ama egwuregwu a dị ịtụnanya na Marseille mepere ọnụ ụzọ ya nye ndị na-ekiri ya azụ 1937. Kemgbe ahụ, Egwuregwu Velodrome na-anabata 67,000 Fans ọ bụla football oge na France. Otu n’ime ihe ị ga-ahụkarị gbasara ama egwuregwu a bụ ugogbe nwere ube, nke siri ike ịhapụ.
Ọ ga-eju gị anya, ma ámá egwuregwu Velodrome abụghị naanị ama egwuregwu bọọlụ. Na ntụle, ọ bụ ọgbọ egwuregwu nwere ọtụtụ nzube, ya na usoro ịgba ígwè. taa, ọ na-eje ozi dị ka ebe obibi nke ụlọ ọgbakọ Olympique de Marseille.
Uzo esi aga na egwuru egwu Velodrome na Marseille?
Egwuregwu Velodrome bụ ihe dị ka 3.5 kilomita site na Marseilles obodo. Ya mere, ị nwere ike iru n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na metro akara 2. Cannwere ike ijide metro na ọdụ ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụrụ na ị na- ejegharị ejegharị na Europe ụgbọ okporo ígwè.
Ga egwuregwu bọọlụ bụ otu n’ime ihe kachasị mma ị ga-eme na Yurop ma ọ bụrụ na ị bụ onye nwere mmasị n’egwuregwu bọọlụ na egwuregwu. ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta ndị dị ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè tiketi na nke ọ bụla n'ime ndị a 7 egwuregwu egwuregwu bọọlụ kachasị ịtụnanya na Europe.
Chọrọ Embed anyị blog post “7 Kasị zingtụnanya Football ama egwuregwu na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Famazing-football-stadiums-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / zh-CN na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#football #bọl Bestfootballstadiumseurope Egwuregwu Europe FIFAworldcup inegba bọọlụ Stlọ football Stadiums bọlstadiumseurope